Itoobiya oo Masar iyo Eritaria ku eedaysay rabshadaha waddanka ka socda - BBC News Somali
Itoobiya oo Masar iyo Eritaria ku eedaysay rabshadaha waddanka ka socda
10 Oktoobar 2016
Image caption Ciidamada ammaanka ayaa lagu eedeeyay inay u isticmaaleen xoog badan dadka mudaaharaadaya
Kooxaha xuquuqda bini'aadanka ayaa sheegay in boqolaal qof ay ku dhinteen mudaaharaadyo socday bilo oo looga soo horjeeday dowladda.
Wasiirka warfaafinta Itoobiya ayaa difaacay xaaladda degdegga ah ee dalka lagu soo rogay, wuxuuna yiro "kooxo dambiilayaal ah oo abaabulan ayaa rayidka bartilmaameedsanayay".
Image caption Dibed baxayaasha ayaa gubay gawaari
Image caption Isdhaafsiga gacmaha waxay astaan u noqotay Oromoada ku kacsan dowladda
Tifaftiraha Afrika ee BBC-da, Mary Harper, ayaa sheegtay in mudaharaadadan rabshadaha wataa yihiin khatartii ugu ba'nayd ee soo food saartay xasiloonida Itoobiya mudo rubuc qarni ah gudaheed.
Wasiirka warfaafinta Itoobiya, Getachew Reda, ayaa Mary u sheegay in xaaladda degdegga ah loola jeeday in lagu mamnuuco bannaan baxyada. "Si loo dhawro xasiloonida dadweynaha dowladdu waxay garawsatay in ay daw tahay in si ku meel gaar ah loo joojiyo mudaharaadda" ayuu yiri, waxuuna intaa ku daray "qaska hubaysan ee ay wadaan kooxahan dambiileyaasha ah ee abaabulani ayaa lagu beegsanayaa xarumaha dowladda iyo kaabeyaasha dhaqaalaha ee muhiimka ah. Waxaanu haynaa caddaymo sugan oo muujinaya inay ka dambeeyaan dad aan doonayn in ay xukuumadda itoobiya ridaan e xataa doonaya inay gabi ahaan ba dalka Itoobiya afka dhulka u daraan."